तपाईले आफ्नो सार्वजनिक IP ठेगाना, देश र इन्टरनेट प्रदायक मेरो IP ठेगाना उपकरण के हो भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। IP ठेगाना के हो? IP ठेगानाले के गर्छ? यहाँ पत्ता लगाउनुहोस्।
तपाईको आईपी ठेगाना
इन्टरनेट प्रदायक: TurkTelecom
कम्पनीको नाम: AS9121 Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi
IP ठेगाना के हो?
IP ठेगानाहरू अद्वितीय ठेगानाहरू हुन् जसले इन्टरनेट वा स्थानीय नेटवर्कमा जडान भएका यन्त्रहरू पहिचान गर्छन्। यो संख्या को क्रम को एक प्रकार छ। त्यसोभए, वास्तवमा "डोरी" भनेको के हो? आईपी ​​शब्द; अनिवार्य रूपमा इन्टरनेट प्रोटोकल शब्दहरूको आद्याक्षरहरू समावेश गर्दछ। इन्टरनेट प्रोटोकल; यो इन्टरनेट वा स्थानीय नेटवर्क मार्फत पठाइएका डेटाको ढाँचालाई नियन्त्रण गर्ने नियमहरूको संग्रह हो।
आईपी ​​ठेगानाहरू; यसलाई सामान्य र लुकेको दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। उदाहरणका लागि, घरबाट इन्टरनेटमा जडान गर्दा, तपाईंको मोडेममा सार्वजनिक IP छ जुन सबैले देख्न सक्छन्, जबकि तपाईंको कम्प्युटरमा लुकेको IP छ जुन तपाईंको मोडेममा स्थानान्तरण हुनेछ।
तपाईले आफ्नो कम्प्युटर र अन्य उपकरणहरूको IP ठेगाना क्वेरी गरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, IP ठेगाना क्वेरीको परिणामको रूपमा; तपाइँ कुन इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा जडान हुनुहुन्छ र तपाइँ कुन नेटवर्क प्रयोग गरिरहनु भएको छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। IP ठेगाना म्यानुअल रूपमा सोध्न सम्भव छ, अर्कोतर्फ, त्यहाँ यस कामको लागि विकसित उपकरणहरू छन्।
IP ठेगानाको अर्थ के हो?
IP ठेगानाहरूले नेटवर्कमा कुन यन्त्रबाट कुन यन्त्रमा सूचना जान्छ भनेर निर्धारण गर्दछ। यसले डाटाको स्थान समावेश गर्दछ र सञ्चारको लागि उपकरण पहुँचयोग्य बनाउँछ। इन्टरनेटमा जडान भएका यन्त्रहरू, विभिन्न कम्प्युटरहरू, राउटरहरू र वेबसाइटहरूलाई एकअर्काबाट अलग गर्न आवश्यक छ। यो IP ठेगानाहरू द्वारा पूरा हुन्छ र इन्टरनेटको सञ्चालनमा एक आधारभूत सिद्धान्त बनाउँछ।
व्यावहारिक रूपमा "आईपी ठेगाना के हो?" प्रश्नको जवाफ पनि यसरी दिन सकिन्छ: IP; यो इन्टरनेटमा जडान भएका यन्त्रहरूको पहिचान नम्बर हो। इन्टरनेटमा जडान भएका प्रत्येक उपकरण; कम्प्युटर, फोन, ट्याब्लेटमा आईपी छ। यसरी, तिनीहरू नेटवर्कमा एक अर्काबाट अलग गर्न सकिन्छ र आईपी मार्फत एक अर्कासँग कुराकानी गर्न सकिन्छ। एक आईपी ठेगाना डट्स द्वारा विभाजित संख्या को एक श्रृंखला समावेश गर्दछ। जबकि IPv4 ले परम्परागत IP संरचना गठन गर्दछ, IPv6 ले धेरै नयाँ IP प्रणाली प्रतिनिधित्व गर्दछ। IPv4; यो लगभग4बिलियन IP ठेगानाहरूको संख्यामा सीमित छ, जुन आजको आवश्यकताहरूको लागि पर्याप्त अपर्याप्त छ। यस कारणका लागि,4हेक्साडेसिमल अंकहरू समावेश गरी IPv6 को 8 सेटहरू विकसित गरिएका छन्। यो आईपी विधिले आईपी ठेगानाहरूको धेरै ठूलो संख्या प्रदान गर्दछ।
IPv4 मा: अंकका चार सेटहरू उपलब्ध छन्। प्रत्येक सेटले0देखि 255 सम्म मान लिन सक्छ। त्यसैले, सबै आईपी ठेगानाहरू; यो ०.०.०.० देखि २५५.२५५.२५५.२५५ सम्म हुन्छ। अन्य ठेगानाहरूले यस दायरामा विभिन्न संयोजनहरू समावेश गर्दछ। अर्कोतर्फ, IPv6 मा, जुन अपेक्षाकृत नयाँ छ, यो ठेगाना संरचनाले निम्न रूप लिन्छ; 2400:1004:b061:41e4:74d7:f242:812c:fcfd।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमा कम्प्युटरहरूको नेटवर्क (डोमेन नाम सर्भर - डोमेन नेम सर्भर (DNS)) कुन डोमेन नाम कुन आईपी ठेगानासँग मेल खान्छ भन्ने जानकारी राख्छ। त्यसोभए जब कसैले वेब ब्राउजरमा डोमेन नाम प्रविष्ट गर्दछ, यसले त्यो व्यक्तिलाई सही ठेगानाहरूमा निर्देशित गर्दछ। इन्टरनेटमा ट्राफिकको प्रशोधन यी आईपी ठेगानाहरूमा सीधा निर्भर हुन्छ।
IP ठेगाना कसरी पत्ता लगाउने?
प्रायः सोधिने प्रश्नहरू मध्ये एक हो "आईपी ठेगाना कसरी फेला पार्ने?" राउटरको सार्वजनिक आईपी ठेगाना पत्ता लगाउने सबैभन्दा सजिलो तरिका गुगलमा "मेरो आईपी के हो" हो? गुगलले यो प्रश्नको उत्तर माथि नै दिनेछ।
लुकेको IP ठेगाना पत्ता लगाउने प्लेटफर्ममा निर्भर गर्दछ:
softmedal.com साइटमा "मेरो IP ठेगाना के हो" उपकरण प्रयोग गरिन्छ।
यो उपकरण संग, तपाईं सजिलै संग आफ्नो सार्वजनिक आईपी ठेगाना पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
कमाण्ड प्रम्प्ट प्रयोग गरिन्छ।
खोज क्षेत्रमा "cmd" आदेश टाइप गर्नुहोस्।
देखा पर्ने बाकसमा, "ipconfig" लेख्नुहोस्।
प्रणाली प्राथमिकताहरूमा जानुहोस्।
नेटवर्क चयन गरिएको छ र IP जानकारी देखा पर्दछ।
Wi-Fi चयन गरिएको छ।
तपाई जुन नेटवर्कमा हुनुहुन्छ त्यसको छेउमा रहेको सर्कलमा रहेको "i" मा क्लिक गर्नुहोस्।
IP ठेगाना DHCP ट्याब अन्तर्गत देखिन्छ।
साथै, यदि तपाइँ अरू कसैको आईपी ठेगाना फेला पार्न चाहनुहुन्छ भने; वैकल्पिक मार्गहरू मध्ये सबैभन्दा सजिलो; यो Windows उपकरणहरूमा आदेश प्रम्प्ट विधि हो।
Windows र R कुञ्जीहरू एकै समयमा थिचेर र खोलिएको फिल्डमा "cmd" आदेश टाइप गरेपछि "Enter" कुञ्जी थिच्नुहोस्।
देखा पर्ने कमाण्ड स्क्रिनमा, "पिंग" कमाण्ड र तपाईंले हेर्न चाहनुभएको वेबसाइटको ठेगाना लेख्नुहोस्, र त्यसपछि "इन्टर" कुञ्जी थिच्नुहोस्। आखिर, तपाईले ठेगाना लेख्नु भएको साइटको आईपी ठेगानामा पुग्न सक्नुहुन्छ।
IP कसरी सोध्ने?
IP ठेगानाको ठेगानाको भौगोलिक स्थान निर्धारण गर्नको लागि, तपाईंले "ip query" विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनुसन्धान परिणाम; सान्दर्भिक शहर, क्षेत्र, जिप कोड, देशको नाम, ISP, र समय क्षेत्र दिन्छ।
भर्चुअल ठेगाना स्थान भन्न सकिने IP ठेगानाबाट मात्र सेवा प्रदायक र क्षेत्र सिक्न सम्भव छ। त्यो हो, घरको ठेगाना आईपी कोडहरू द्वारा स्पष्ट रूपमा फेला पार्न सकिँदैन। साइटको आईपी ठेगानाको साथ, यो कुन क्षेत्रबाट इन्टरनेटमा जडान हुन्छ भनेर मात्र निर्धारण गर्न सकिन्छ; तर तपाईले सही स्थान फेला पार्न सक्नुहुन्न।
त्यहाँ धेरै वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाइँ IP सोध्न सक्नुहुन्छ। Softmedal.com मा "मेरो आईपी ठेगाना के हो" उपकरण ती मध्ये एक हो।
IP ठेगाना कसरी परिवर्तन गर्ने?
अर्को बारम्बार सोधिने प्रश्न "कसरी आईपी ठेगाना परिवर्तन गर्ने?" प्रश्न छ। यो प्रक्रिया3तरिकामा गर्न सकिन्छ।
1. विन्डोज मा आदेश संग आईपी परिवर्तन
स्टार्ट बटन थिच्नुहोस्।
Run मा क्लिक गर्नुहोस्।
खोलिएको बक्समा "cmd" आदेश टाइप गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस्।
खुल्ने विन्डोमा "ipconfig / रिलीज" टाइप गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस्। (अवस्थित आईपी कन्फिगरेसन सञ्चालनको परिणामको रूपमा जारी गरिएको छ)।
प्रक्रियाको परिणाम स्वरूप, DHCP सर्भरले तपाइँको कम्प्युटरमा नयाँ आईपी ठेगाना प्रदान गर्दछ।
2. कम्प्युटर मार्फत आईपी परिवर्तन
तपाईले आफ्नो आईपी ठेगाना कम्प्युटरमा विभिन्न तरिकामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सामान्य विधि; भर्चुअल निजी नेटवर्क (भर्चुअल निजी नेटवर्क) VPN प्रयोग गर्न हो। VPN ले इन्टरनेट जडान इन्क्रिप्ट गर्दछ र तपाइँको छनौट गरिएको स्थानमा सर्भर मार्फत मार्ग प्रदान गर्दछ। त्यसैले नेटवर्कमा भएका यन्त्रहरूले VPN सर्भरको IP ठेगाना देख्छन्, तपाईंको वास्तविक IP ठेगाना होइन।
VPN को प्रयोगले तपाईलाई सुरक्षित वातावरण दिन्छ, विशेष गरी यात्रा गर्दा, सार्वजनिक Wi-Fi जडान प्रयोग गर्दा, टाढाबाट काम गर्दा, वा केहि गोपनीयता चाहानुहुन्छ। VPN को प्रयोगको साथ, केहि देशहरूमा पहुँच गर्न बन्द गरिएका साइटहरू पहुँच गर्न पनि सम्भव छ। VPN ले तपाईंलाई सुरक्षा र गोपनीयता दिन्छ।
एक VPN सेट अप गर्न;
आफ्नो रोजाइको VPN प्रदायकसँग साइन अप गर्नुहोस् र एप डाउनलोड गर्नुहोस्।
एप खोल्नुहोस् र आफ्नो देशमा सर्भर छान्नुहोस्।
यदि तपाइँ अवरुद्ध साइटहरू पहुँच गर्न VPN प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले रोजेको देश अनब्लक छ भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्।
तपाईंसँग अब नयाँ आईपी ठेगाना छ।
3. मोडेम मार्फत आईपी परिवर्तन
सामान्य आईपी प्रकारहरू; स्थिर र गतिशील मा विभाजित। स्थिर आईपी सधैं निश्चित छ र प्रशासक द्वारा म्यानुअल रूपमा प्रविष्ट गरिएको छ। डायनामिक आईपी, अर्कोतर्फ, सर्भर सफ्टवेयर द्वारा परिवर्तन गरिएको छ। यदि तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको आईपी स्थिर छैन भने, तपाइँसँग मोडेम अनप्लग गरेपछि, केहि मिनेट पर्खिएर र यसलाई पुन: प्लग इन गरेपछि नयाँ आईपी ठेगाना हुनेछ। कहिलेकाहीँ ISP ले उही आईपी ठेगाना बारम्बार दिन सक्छ। मोडेम जति लामो समयसम्म अनप्लग रहन्छ, नयाँ IP प्राप्त गर्ने सम्भावनाहरू उति नै बढी हुन्छ। तर यदि तपाईले स्थिर आईपी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने यो प्रक्रियाले काम गर्दैन, तपाईले आफ्नो आईपी म्यानुअल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
एक आईपी विवाद के हो?
समान नेटवर्कमा जडान गरिएका IP ठेगानाहरू अद्वितीय हुनुपर्छ। एउटै नेटवर्कमा कम्प्युटरहरू एउटै आईपी ठेगानाको साथ पहिचान गरिएको स्थितिलाई "आईपी द्वन्द्व" भनिन्छ। यदि त्यहाँ आईपी विवाद छ भने, उपकरण बिना समस्या इन्टरनेटमा जडान गर्न सक्दैन। नेटवर्क जडान समस्या उत्पन्न हुन्छ। यो अवस्था सच्याउन जरुरी छ । एउटै आईपी ठेगाना बोकेर नेटवर्कमा विभिन्न उपकरणहरू जडान गर्दा समस्या सिर्जना हुन्छ र यसले आईपी द्वन्द्वको समस्या सिर्जना गर्दछ। जब त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, यन्त्रहरूले एउटै नेटवर्कमा काम गर्न सक्दैनन् र त्रुटि सन्देश प्राप्त हुन्छ। IP द्वन्द्व मोडेम रिसेट गरेर वा म्यानुअल रूपमा IP पुन: असाइन गरेर समाधान गरिन्छ। अलग आईपी ठेगाना भएका यन्त्रहरूले कुनै पनि समस्या बिना फेरि काम गर्नेछन्।
जब त्यहाँ आईपी विवाद छ, समस्या समाधान गर्न;
तपाईं राउटर बन्द र सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं नेटवर्क एडाप्टर असक्षम र पुन: सक्षम गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं स्थिर आईपी हटाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईं IPV6 असक्षम गर्न सक्नुहुन्छ।